Alaabta Safe, Organic Teethers, Sweetooth Baby Teether - Melikey
Qalabka Ilmaha ee Waxbarashada
Bowl Silikoon ah
Jumlada - Habaynta - OEM&ODM
Waxaan leenahay koox xirfad leh R & D waxaanan bixinaa adeegga OEM/ODM. Xirfadle ka ahaa warshadaha silikoon muddo 10+ sano ah
Melikey waa astaan ​​canug oo silikoon ah oo Shiinaha ah oo ay iska leedahay Huizhou Melikey Silicone Product
Melikey waxa aad loogu yaqaanaa agabka cuntada ee ilmaha silikoonka ah iyo alaabta carruurtu ku ciyaarto ee silikoon.
Oo ay ku jiraan biibiile silikoon ah, maddiibado dhallaanka silikoon, saxanadaha ilmaha silikoon, malqacadaha ilmaha silikoon,
Ilkaha silikoon iyo kuul silikoon, iwm. Shiinaha ilmaha alaabta lagu ciyaaro alaab-qeybiyaha.
Shirkadda waxaa la aasaasay 2016 waxayna ku taal magaalada Huizhou ee gobolka Guangdong. Bilowgii
, shirkadu waxay ahayd kaliya aqoon-is-weydaarsi yar oo leh 1 iibiye.
Horumarinta kooxda ganacsiga ayaa sii waday inay koraan, iyo miisaanka shirkadda
ayaa sidoo kale la ballaariyay. Maamulaha shirkadu waa hooyo ilmo dhashay.
Sababtoo ah waxay ogtahay sida ay muhiimka u tahay caafimaadka iyo badbaadada ilmaha, falsafada ugu horeysa ee shirkadda
had iyo jeer waa "tayada alaabadu ay tahay nolosha".
Shirkaddu waxay dejisay nidaamka maaraynta tayada oo buuxiya shuruudaha
nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah. Shirkaddu waxay si joogto ah u soo saartaa
hal-abuurka asalka ah iyadoo loo eegayo suuqa iyo baahiyaha macaamiisha, waxayna had iyo jeer ilaalisaa wax cusub
iyo hal-abuurnimada alaabta.
Waxaan leenahay koox xirfad leh R & D. Waxaan aqbali karnaa OEM iyo OD M.
Ku Faana Inaad Noqoto Shiinaha Soo saaraha Waxsoosaarka Silikoon ee ugu sarreeya
Melikey Silicone waa magac aan caadi ahayn oo ka mid ah alaabada silikoon ee ugu fiican Shiinaha. Waxaan leenahay in ka badan 12 sano waayo-aragnimo in warshad soo saarista silikoon caaryada alaabta. Waxaan ka caawineynaa shirkadaha waaweyn iyo kuwa yar ee adduunka si ay ugu hormariyaan naftooda si wax ku ool ah iyada oo loo marayo xooggayaga warshadaha alaabada silikoonka iyo wholesale silicone products suppliers. Proud to be the leading silicone teether manufacturer, baby toys wholesale suppliers.
Waxaan u isticmaalnaa alaab tayo sare leh oo silikoon ah si aan u soo saarno alaabtayada silikoon ee ilmaha jumlo ahaan ( Jumlo silikoon ah, ,silicone beads wholesale,baby feeding sets wholesale, silicone bowl wholesale,silicone plate wholesale,silicone bib wholesale,silicone cup wholesale, and wholesale baby toys ).
Sannadaha waayo-aragnimada wax-soo-saarka ayaa noo ogolaanaya inaan si fudud u maareyno dhammaan silsiladaha wax-soo-saarka, taas oo ah faa'iidadayada gaarka ah sida soo saaraha ugu fiican ee alaabta cuntada ee ilmaha silikoon iyo silikoon saanqaadayaasha carruurtu ku ciyaarto, iyo dammaanad xooggan oo noo ah inaan bixinno adeegyo wax soo saar oo jumlo ah oo loogu talagalay alaabta silikoon.
Waxaan inta badan wax soo saarka jumlada iyo caadadii . Alaabooyinka wax soo saarka ee jumlada ah waxay sidoo kale hoos u dhigtaa qiimaha halbeegga iyo qiimaha rarida ee alaabta. Waxaan sidoo kale aqbalnaa dalabaadka dufcada yar ee MOQ gaar ah si aan uga caawino iibsadaha inay si fiican u tijaabiyaan alaabadayada oo ay u helaan jawaab celinta suuqa si dhakhso ah. Nala soo xidhiidh maanta, nagula sheekee online ama wac +86 13480570288 si aad u bilowdo mashruucaaga.
Melikey waa alaab- qeybiye silikoon ah oo leh adeegga habeynta warshadda . Waxaan taageernaa alaabada la habeeyey sida LOGO-ga gaarka ah, baakadaha, midabka, iwm. Shay kasta oo caado u ah wuxuu leeyahay badeecad kala duwan MOQ. Laga soo bilaabo naqshadaynta alaabta ilaa waxka beddelka, Melikey waxay siisaa adeegyada ugu qiimaha badan ee alaabtaada. Waxaan taageernaa habaynta dhammaan alaabooyinka, Ku soo dhawoow amarada OEM&ODM!
Waxaan muhiimad weyn siinaa naqshadeynta alaabtayada waxaanan leenahay shatiyo. Aan ku lug lahayn arrimaha xadgudubka, waxaa naga go'an inaan soo saarno alaabada asalka ah oo aan ka dhigno alaabadayada laga heli karo adduunka oo dhan.
Halkan waxaa ah wax badan oo ku saabsan alaab-qeybiyaha jumlada ah ee ugu fiican alaabta silikoonka !
Silikoon iyo Teether Ring Ring Custom OEM l Mel...
Quudinta Ilmaha Diyaarso Alaabta miiska Silikoon ee Jumlada l...
Saxanka Silikoon ee Ilmaha Habeeya Quudinta Caadiga ah l Melikey
Koob Silikoon leh Caws Ilmo Jumlo l Melikey
Wershada Jumlada ee Silikoon Ilmaha Meel Dhigashada lMelikey
Cunuga Cunugga ee Silikoon Montessori Jumladeedka
Silicone Ilko Alaabta BPA Jumlada Free Mel ...
Suxuunta Ilmaha iyo Baakadaha BPA Cunto Jumlad oo Bilaash ah ...
Tababbarka Koobka Silicone Sippy Infant Eco Fri ...
Dalka Shiinaha oo Hogaaminaya Alaabaha Silikoon-sameeyaha & Iibiyaha Jumlada ee Alaabta Silikoon
Sida soo saaraha alaabta silikoon ee ugu sarreeya iyo qeybiye silikoon ah oo jumlo ah , waxaan leenahay khibrad ka badan 12 sano oo soo saarista alaabada silikoon, alaabada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ilkaha silikoonka,kuul silikoon jumlo ah,miis dhallaanka, xirmooyin quudinta ilmaha oo jumlo ah iyo alaabooyin kale oo silikoon ah. Sannado waayo-aragnimo ah ayaa ka dhigtay silsiladeena sahayda ganacsi ee jumlada ah ee alaabada silikoonka mid aad u bislaaday. Isla mar ahaantaana, waxaan haysanaa R&D Team xirfad leh, waxaanan yeelan doonaa alaab silikoon ah oo iskood isku qaabeeya bil kasta. Waxaan ku siin karnaa fikrado cusub iyo dhamaystir hufan oo naqshadaynta alaabtaada.
Sida warshadda alaabta silikoon iyo alaab-qeybiyaha jumlada ah ee ugu fiican alaabta silikoonka, waxaanu aqbalnaa adeegga OEM iyo ODM, noo soo dir naqshadaada, waxaanu samayn karnaa muunad dhab ah 7 maalmood gudahood, ku dheji astaantaada alaabta carruurta ee jumlada ah ,ilko dhallaanka badan , kuul silikoon iyo alaabta miiska ilmaha , iwm. Warshadayada alaabta silikoonka ee aan caadiga ahayn waxay ku takhasustay wax soo saarka badan ee alaabta silikoon. Wax soo saar kasta oo silikoon ah dhib naguma aha. Haddi aad tahay jumle ama calaamad, warshadeena wax soo saarka silikoonka ee ugu fiican ayaa kaa caawin doonta inaad si dhakhso leh ugu kobciso ganacsigaaga alaab tayo sare leh iyo adeeg hufan.
Haddii aad rabto inaad bilowdo habaynta alaabta silikoon, fadlan xor u noqo inaad nala soo xiriir! Providing excellent customer service is the eternal pursuit of Melikey Silicone as the best supplier of silicone products!
Waxaan leenahay koox xirfad leh R & D. Taageerida Habaynta, oo ay ku jiraan naqshada alaabta, astaanta, xirmada, midabada..... Waan aqbali karnaa OEM iyo OD M.
Khadadka Wax soo saarka dabacsan
Alaabooyinka silikoon ee adiga laguugu talagalay, kuwa badan oo la soo saaray, oo leh waqtiyo ledh gaaban oo gaaban. Dhammaantood waxay ka yimaadaan xaqiiqda ah inaan nahay alaab-qeybiyaha ugu fiican ee alaabta silikoon.
Qalabka waxaa bixiya alaab-qeybiyeyaal caadi ah. 100% QC alaabta ceeriin. Dhammaan alaabooyinka silikoonku waxay mareen tijaabooyin kala duwan iyo wax soo saar ballaaran si loo hubiyo heerar tayo sare leh, alaab kastana waa inay maraan baaritaanno adag ka hor intaysan diyaar u ahayn in la raro.
In ka badan 12 sano oo Khibrad ah
Xirfadle ka ahaa warshadaha silicone in ka badan 12 sano. Melikey Silicone waxay bixisaa fikrado cusub oo hagaajiya waxtarka iyo waxtarka lammaaneheena ee goobta shaqada.
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2022: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin. Guide ,Hot Products ,Sitemap ,amp Mobile
ilko silsilad gabar ilmaha, teether ugu wanaagsan ee 4 bil jir ah , Ilko dabiiciga ah, silicone teether ilmahaaga , silicone teether , silicone kuul ilko ,